आफ्नो एउटा खुट्टा गुमाएका लाल बहादुर दुई छोरीलाई स्टाफ नर्स पढाउन अनेक गर्दै (भिडियो सहित ) – Complete Nepali News Portal
आफ्नो एउटा खुट्टा गुमाएका लाल बहादुर दुई छोरीलाई स्टाफ नर्स पढाउन अनेक गर्दै (भिडियो सहित )
Sisir Budhathoki June 28, 2018
संघर्षनै जीवनको मूल आधार मानेर आफु अपाङ्ग भएता पनि विभिन्न मेला महोत्सवमा आफ्नो प्रतिभा देखाएर दुइ छोरीहरुलाई स्टाफ नर्स पढाइ रहेका (एल. बि.) लाल बहादुर तामाङ्गले पोखराको महोत्सबमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरे । लाल बहादुर तामाङ्गले जिबनमा धेरै ठक्कर खाएको अनुभब सुनाएका छन् । आफ्नी श्रीमतीले पनि आफु दुर्घटनामा परि एउटा खुट्टा गुमाएपछि छोडेको कुरा उनले बताए । २ जना छोरिलाइ स्टाफ नर्स पढाईरहेका लाल बहादुर भिभिन्न महोत्सबमा जादु तथा एक खुट्टा नभएपनि स्टेजमा नाच्न्ने गर्छन । उनले आफुले गरेको कामको बारेमा बताउदै आपाङ्ग भएपनि सच्चा मन बाट जे काम गरेर पनि जिबन चलाउन सकिन्छ भन्ने संदेश दिएका छन् । तल भिडियोमा उनको प्रस्तुति हेरी सहयोगका लागि सेयर गर्दिनुहोला ।